July 2013 ~ MOBILE IT NEW
MOBILE IT NEW APK
အသစ်တင်တိုင်း Mail သို့ပို့ပးမယ် FeedBurner
GSM ဖုန်းတွေအတွက် Call Waiting နဲ့ Call Forwarding Service
9:02 PM နည်းပညာများ, ဗဟုသုတများ No comments
Android ဖုန်းတော်တော်များများရဲ့ Call Setting ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရင်
Call Waiting ၊ Call Forwarding အစရှိတဲ့ Funcation တွေကိုပါဝင်တာ
တွေ့ရပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ သုံးလို့မရပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ရှိ
ကျွန်တော်တို့တွေသုံးနေတဲ့ MPT ကဖွင့်ပေးမထားလို့ပါပဲ ၊
ဟိုးအရင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲဒီ Service မပေးပါဘူး ၊ အခုကတော့
(ဘယ်တုန်းစရလဲသေချာမသိပါ) ပိုက်ဆံပေးရင်လျောက်လို့ရပါပြီ ၊
Video ကို Wallpaper အဖြစ်အသုံးပြုနည်း
9:01 PM computer Software, နည်းပညာများ No comments
ဓာတ်ပုံတွေကိုပဲသုံးရတာပြင်းစရာကောင်းပါ တခါတလေအပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင်သုံးကြည့်ရအောင်ပါ VLC Player နဲ့သုံးတာပါ ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ် သူနည်းသူသုံးများတဲ့ Player ပဲကို
၁.VLC Player ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
၂.Tools=>Preference ကိုသွားပါ(Ctrl+P နှင့်လည်းသွားနိုင်ပါတယ်)
၃.Directx Video Output ကိုရွေးပါ ကျတော်အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပါ
4:19 AM နည်းပညာများ, ဗဟုသုတများ No comments
အခြေခံ သိသင့်တဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ။ မေးလာသူ ရှိလို့ မသိသူများ အလွယ်ကူဆုံး နားလည်အောင် ရှင်းပြလိုက်ရ ပါတယ်။
RAM ဆိုတာ ၁၀ တန်းတုန်းက သင်ရတဲ့ စာအတိုင်း ပြောရရင် Read and Write ရတဲ့ Memory လို့လွယ်လွယ်မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ရေးလို့လည်းရ၊ ဖတ်လို့လည်းရဆိုတော့ အဲ့ RAM အပြားအချပ်က စာအုပ်တစ်အုပ်များလား လို့ အဲ့တုန်းကတည်းက ကလေးတွေးနဲ့ တွေးဖူး ပါတယ်။ ဒီလိုရှိပါတယ် -
Random Access Memory ပါ။ မြန်မာလို တိုက်ရိုက် ဘာသာ ပြန်တော့ ကျပန်း ဝင်ရောက်နိုင်သော သိမ်းဆည်းသူပေါ့။ သို့ပေမယ့် နည်းပညာ ကျကျ ပြောရင် RAM လို အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကျပန်း ဆိုတာ ဒီလိုပါ။ ၁ ကနေ ၁၀ အထိဆီစားရင် ROM က အစဉ်လိုက် ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဥပမာ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံး Power On လိုက်တဲ့အခါ Command Line ပေါ်လာမယ်။ Windows Version ဘယ်လောက်ဆိုပြီး Screen တက်လာမယ်။ ပြီးတော့ Home Screen အစရှိသဖြင့်တို့က ROM မှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Memory ဖြစ်ပြီး အစဉ်လိုက်ကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွန်ပြူတာဖွင့်ဖွင့်ချငး Home Screen အတန်းပေါ်လို့ မရပါဘူး။ ROM မှာကိုက အစဉ်လိုက်သွားလိုက် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဖျက်လို့မရဘူး လို့အကြမ်းဖျင်း မှတ်သားထား နိုင်ပါတယ်။
သင့် Facebook ကိုယူသုံးသွားတယ်လို့ထင်ရတာကို ဘယ်လို Trace လိုက်မလည်း
12:39 AM internet, ဗဟုသုတများ 1 comment
ကျွန်တော်တို့ သင့်ရဲ့ Facebook account ကို တစ်ခြား
တစ်ယောက်က ၀င်သုံးသွားတယ်လို့ သံသယ ရှိနေတယ်ဆိုရင်
ဘယ်လို Trace လိုက်မလည်း။ပြီးတော့ အဲဒီလူရဲ့ တည်နေရာကို
ဘယ်လိုခြေရာခံပြီးတော့ ဘယ်လို သင့်အကောင့်ထဲကနေ လှမ်းပြီး
Sign Out လုပ်မလည်းဆိုတာကိုပြောပါ့မယ်။
အရင်ဆုံး သင့် Facebook Account ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးသွာ့းရင် Setting ထဲက Account Setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ.
ထိုသို့ဝင်ပြီးသကာလ အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း Security ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ဓါတ်ပုံတွေကို Video အဖြစ်သီချင်းလေးတွေနောက်ခံထားပြီး လုပ်ချင်သူတွေအတွက် ဖိုင်ဆိုဒ်လေးပြီး လန်းတဲ့ Video Editor
5:05 AM computer Software 1 comment
ဗီဒီယိုတွေကို Edit လုပ်ချင်လို့ Power Director တွေလို
2GB လောက်ရှိတာတွေ မဒေါင်းနိုင်ဘူး လိုင်းမကောင်းလို့ပါ ဘယ်ဟာလေး
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 60MB တောင်မပြည့်ပါဘူး
ဓါတ်ပုံတွေကို သီချင်းလေးတွေ နောက်ခံထည့် မိမိချစ်သူကို
အမှတ်တရပေးချင်သူတွေလည်း သုံးနိုင်တယ် ၊ ဒီဖိုင်ဆိုဒ်နဲ့
Video Editor ဆိုကတည်းက စာတန်းထိုးတာ ကားကူးကားဆက် ၊ Effect ?
Transation အစရှိတာတွေ အကုန်ပါပြီးသားဆိုတော့ အားလုံးအတွက်
နာမည်ကြီးကုမဏီ Wondershare က ထုတ်ထားတာဆိုတော့
တကယ်ကို သုံးရလွယ်အောင် လုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်
Version လေးကတော့ နောက်ဆုံးထွက်လေး 3.1.3 ပါ
8:29 PM ဗဟုသုတများ No comments
ဖုန်းကိုင်ထားသော ကိုကို ၊ မမ များ သိထားသင့်သော အကြောင်းအရာလေးများ မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံး ၏ လျှို့ဝှက်ချက် ငါးခု
လူအများ စုဟာ မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ အသုံးဝင်မှု လျှိုဝှက်တွေကို သိရှိသူတွေ အလွန် နည်းပါးနေ ပါတယ်။ ကိုင်နေတဲ့လူ
အများစုဟာ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အသုံးဝင်မှုကို အများအားဖြင့် Camera, Music, Bluetooth, FM, Radio. Alarmနဲ့ Game အစ
ရှိတာ...တွေ လောက်သာ အသုံးပြုနေကြတာများပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီထက်ပိုပြီး အသုံးဝင်မှုနဲ့ လျှို့ချက် အနည်း ငယ်ကို ဖော်
Apple ထုတ်ကုန်သစ် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိ
8:09 PM Mobile သတင်းများ No comments
iPadနှင့် iPad Miniတို့ဖြင့် အောင်မြင်မှုများ ရရှိနေသည့်တိုင် Appleအနေဖြင့် Tablet ကွန်ပျူတာ ဈေးကွက်တွင် Screenအရွယ်အစား ကြီးမားသော Tabletတစ်မျိုးဖြင့် နောက်ထပ် ထိုးဖောက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်လာသည်။ Appleသည် ၎င်းတို့၏ လက်ရှိထုတ်ကုန်များတွင် အသုံးပြုထားခြင်း မရှိသည့် အရွယ်အစားနှင့် Touchscreen တစ်မျိုးကို စတင် စမ်းသပ်နေပြီဟု ယုံကြည်ရသည်။ ယင်းနှင့်အတူ (၁၃)လက်မအရွယ် iPad အကြီးစား တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်လာဖွယ် ရှိနေကြောင်း ခန့်မှန်းမှုများ ကျယ်ပြန့်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
အာရှတိုက်မှ Appleအတွက် Hardware ထုတ်လုပ်ပေးသော ကုမ္ပဏီအချို့ထံမှ ပေါက်ကြားလာသည့် သတင်းအရ Appleသည် မျိုးစပ်နည်းပညာသုံး Screenတစ်ခုအတွက် အရွယ်အစားအသစ် သတ်မှတ် မှာယူရန် အစီအစဉ် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ Appleသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်သစ်များနှင့် ပတ်သက်လျှင် တရားဝင် မိတ်မဆက်သေးခင် အလွန်လျှို့ဝှက်တတ်သည့် အစဉ်အလာအတိုင်း ယခုကိစ္စအပေါ် မည်သည့်မှတ်ချက်မျှ မပေးခဲ့ချေ။
အင်တာနက် search engine တွေမှာ professional တစ်ယောက်အဖြစ်ကိုလိုချင်တာကိုအလွယ်တကူရှာကြမယ်
5:15 AM internet, ဗဟုသုတများ2comments
ဒီနေ့ အင်တာနက်မှာကိုလိုချင်တာကို pro တစ်ယောက်လိုရှာကြမယ်ဗျာ။
google ; Yahoo ;lii;Dmz စသည်ဖြင့် search engine တွေမှာ မိမိလိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကိုရှာတဲ့ အခါမှာ မိမိအထူးပြုတဲ့ အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးနိုင်မှသာ rescult အများကြီးကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးကိုယ် လိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာနိုင်မှာပါ။ကဲအောက်မှာကြည့် လိုက်ကျရအောင်ဗျာ
RAR File နဲ့ ZIP File တွေ password မသိတော့ရင် အလွယ်ကူဆုံးဖြည်နည်း
5:04 AM computer Software, နည်းပညာများ No comments
ဒီနေ့ ကျွန်တော့် စာဖတ်မိတ်ဆွေများထဲက နည်းပညာပိုင်း အားနဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒေါင်းလော့ချထားတဲ့ File တွေမှာ ပတ်ဝတွေနဲ့ ဖြစ်နေတာ မသိတော့ ဖြေမရဖြစ်နေတာ တွေ အတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ rar zip password ဖြေနည်းလေး ပြောပေးလိုက်ပါတယ် ဒီနည်းအတွက် winrar ဆော့ဝဲလ်နဲ့ အင်တာနက် ရှိဖို့တော့လိုပါတယ် winrar ကတော့ စက်တိုင်းနီးပါးရှိပါလိမ့်မယ်
Facebook Video များကို ဆော့ဝဲမလိုပဲ အလွယ်ဒေါင်းနည်း
7:53 PM internet2comments
ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ကို ပုံမှန်ဒေါင်းသူတွေ အများစုက IDM
ကိုစက်ထဲမှာ သွင်းထားတဲ့ အတွက် Video ဒေါင်းတာတွေနဲ့ပက်သတ်ရင်
အခတ်အခဲမရှိပါဘူး ဒေါင်းမလားဆိုတာ အလိုလိုပေါ်လာပါတယ်
ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်ပိုင်စက်မဟုတ်ဘဲ အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးသူတွေ
ကျတော့ လိုင်းမကောင်းရဲ့ကြားထဲ IDM ပါ ထပ်ဒေါင်းရမယ်ဆို အဆင်မပြေဘူး
ဒါကြောင့် ဒီနည်းလေးကို ကျွန်တော်သိသလောက် တင်ပြလိုက်ရတာပါ။
facebook video တွေကို ဒေါင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာရှိပေမယ့်
အခုနည်းလေးကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အဆင်ပြေနေဆဲမို့ပါ
ကွန်ပျူတာ အခြေခံကိုသေချာမသိသူတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေအောင်
Software တွေဘယ်လိုသွင်းပြီး ၊ ဘယ်လိုပြန်ထုတ်မလဲ
8:48 AM computer Software No comments
မိမိကွန်ပျူတာထဲကို software တွေသွင်းတော့မယ် ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး အပေါ်ပုံမှာ ပြထားတဲ့ Icon ပုံလေးတွေကို အရင်ရှာကြည့်ပါ..။ အဲလိုပုံလေးတွေရဲ့ဘေးမှာ SETUP တို့ Install တို့ဆိုတဲ့ စာသားကိုလည်း ကြည့်ရမှာပါ..။ တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ မောက်စ်လက်ညိုးခလုတ်နဲ့ Double Click နှစ်ချက်ပေးလိုက်ပါ.. Yes , No ဘောက်စ်လေးတခု ပေါ်လာရင် Yes ကိုနှိပ်ပါ..။ ပြီးရင်တော့ Next ပေါ်လာတိုင်းနှိပ်ပေးပါ.. accepted license agreement စာသားမျိုးပါရင်တော့ အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ..
ပြီးရင်တော့ Install ပေါ်လာရင် နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. ဆော့ဝဲလ်တွေ များသောအားဖြင့် ဒီနည်းအတိုင်းပါပဲ.. မတူတာရှိရင်လည်း နဲနဲပါပဲ.. တချို့ဆော့ဝဲလ်တွေက Install ဆွဲရမယ့်နေရာမှာ သူ့တို့ Icon ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်..။ အဲပုံလေးတွေကို Double Click နှိပ်ပေးရပါတယ်.. နမူနာအနေနဲ့ အောက်ကပုံလေး တွေကိုကြည့်ကြည့်ပါ..
8:47 AM computer Software 1 comment
သင့်ကွန်ပျူတာ သုံးရတာ အရမ်းလေးနေမယ် ဆိုရင် သည်နည်းလမ်းလေးက လည်းတဖက်တလမ်းကနေ
အသုံးဝင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်.... အရမ်းလွယ်ကူရိုးရှင်းတာကြောင့် စမ်းသတ်စေခြင်တယ်။
ပထမဆုံး မိမိကွန်ပျူတာက Run Box ကိုဖွင်.လိုက်ပါ Win+R ကိုတွဲကလစ်လဲရပါတယ်..
နောက် ကျလာတဲ့ run box ထဲမှာ msconfig လို.ရိုက်ပြီး enter (သို့) OKလုပ်လိုက်ပါ..
အဲခါမှာဘဲ ပုံမှာ ပြထားသလို ဘောက်တစ်ခုကျလာမယ်...
ကော်ပီကို စက်သေနတ်ပစ်သလို ကူးပေးမယ့် Super Copier
8:45 AM computer Software 1 comment
ကွန်ပြူတာကို အသုံးပြုနေတဲ့သူငယ်ချင်းတို့တွေဟာ ဖိုင်မျိုးမျိုးကို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ကော်ပီကူးတယ်ဆိုတာ မကြာခဏ ဆောင်ရွက်နေကျ ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ် ..
ဖိုင်ဆိုဒ်သေးရင် သိပ်မသိသာပေမယ့် ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးကြီးကို ကော်ပီကူးတဲ့အခါမှာ အချိန်တော်တော်ပေးရရင် စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ် ..
Password Lock ကျနေသော Lumia 920 ကို Hard Reset လုပ်ခြင်း
8:42 AM password and pattern delete No comments
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် Nokia Lumia with Windows Phone 8 မှာ Password ထားမိပြီး
မေ့သွားလို့ ပြန်လုပ်ယူလို့ မရတော့တဲ့ အခါ Lock ကျသွားတက်ပါတယ်။ Password ကလည်း ဘယ်လိုမှ
စဉ်းစားလို့မရ၊ Try ရင်း Try ရင်း Lock Time ကလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း နာရီတွေ များလာပြီဆိုရင် Hard
Reset ချဖို့ လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ်။
( Lock မကျထားတဲ့ ဖုံးဆိုရင်တော့ Setting ကနေ Reset ကို လွယ်ကူစွာ လုပ်နိုင်ပေမဲ့
Locked ဖြစ်နေတဲ့အခါ အဆိုပါနည်းလမ်းကို သုံးလို့မရတဲ့အတွက် Key တွေကို နှိပ်ပြီးေ
အာက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
Lumia ကို ပြန်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ တစ်နည်းအားဖြင့် Format လုပ်ပြီး Factory Reset ချကာ ပြန်လည်
အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
4:26 AM windows တင်နည်း No comments
သင့် android phone ကနေ windows ကို အင်စတောလုပ်ဖို့ နည်းကို ရေးပေးပါမယ်။ သင့်မှာ Windows Cd/Dvd အခွေ၊ USB stick တွေမရှိရင် ဒီနည်းကအသုံးဝင်ပါတယ်။Windows installer disc ကို သင့် ဖုန်း မှာ ဆောင်သွားသလို ပါပဲ ။အဲဒီလို ဆောင်ထားတဲ့အတွက် သင့်ဖုန်းကနေပဲ ၀င်းဒိုး အင်စတောလုပ်တာတွေ၊ ၀င်းဒိုးကို repair လုပ်တာတွေ၊system restore လုပ်တာတွေ၊၀င်းဒိုးကပြဿနာတွေကို အဖြေရှာတာတွေ၊Boot မတက်တော့တဲ့ ကွန်ပြူတာကဖိုင်တွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေ သိမ်းဆည်း တာတွေ ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလို လုပ်ဖို့ အတွက် DriveDroid ဆို တဲ့ android application ကိုသုံးပါမယ်။သင့်ဖုန်းဟာ root လုပ်ထားဖို့ လို ပါတယ်။နောက်ပြီး DriveDroid က android 2.2 နဲ့ သူ့ အထက်မှာ ပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
G610-U00 မြန်မာစာ မှန်ပါပြီ
4:18 AM Myanmar Font များ No comments
credit to >> Nga Luu
ကို Nga Luu ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကို လေးစားပါတယ်ဗျာ :)
လုပ်နည်းကို အဆင်ပြေအောင်စာပြန်စီပေးလိုက်ပါတယ် :)
ပြန်တင်နိုင်အောင်လို့ပါ...။Cwm...တင်ထား.မိသူတွေကတော့..dload နဲ့..ပြန်တင်လို့...အဆင်ပြေမှာ...မဟုတ်လို့...cwm နဲ့...backup လုပ်ထားကြပါ..ခင်ဗျာ...
9:05 PM Virus No comments
SVCHOST.EXE က Flash Drive များမှတဆင့် မိမိကွန်ပျူတာဆီသို့အချိန် မရွေးရောက်နိုင်
ပါတယ်..သူတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရရင် Signature တွေအနေနဲ့ ဒီလိုပြလေ့ရှိပါတယ်..
1. အဲဒီအချိန်က သုံးခဲ့တဲ့ Flash Drive ကိုပြန်တောင်းနေတတ်ပါတယ်..
2. Windows Directory ကိုမခေါ်ပဲနဲ့ တက်လာပါတယ်..
ဒါဆိုရင်တော့ SVCHOST.EXE ရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံနေရပြီလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်..
Notepad ဖြင့် Keylogger တစ်ခု ရေးသားနည်း ( မြန်မာလို )
8:53 PM နည်းပညာစာအုပ်များ2comments
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ အဓိက G-Talk ကို ဦးတည်ပီး Hack နည်း တစ်ခု အဖြင့် ရေးသားပေးထားတာပါ။
လိုချင်တဲ့သူများ အောက်က လင့်မှာဒေါင်းလော့ ရယူနိုင်ပါပီ။
ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာ သမားတွေပာာ ကျွန်တော်တို့မှတ်သား မိသလောက်တွေကို
တစ်ခြားသူတွေ ထံ မျှ ဝေ ပေးတတ်ကြပါတယ်။ သင်ကော လေ့လာ မှတ်သား မိတာတွေ
ရှိခဲ့ရင် သင့် လက်လှမ်း မှီ သလောက် မိတ်ဆွေ များကို ပြန်လည် မျှဝေပေးပါလို့ 
မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါတယ်။
PC အတွက် CCleaner Professional Business Edition 4.02.4115 Full version 4.15MB
8:48 PM computer Software No comments
CCleaner သုံးတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် CCleaner Professional Full version လေး
ဖြစ်မှာပါ။ Professional မှာ Feature တွေပိုပြီတော့စုံလင်ပါတယ်။
သူ့မူရင်းဆိုဒ်မှာ 25$ ပေးရတဲ့ဆော့ဝဲပါ။
Software City မှာတော့ Free Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Online တွင်အမှန်အကန် ငွေပေးကြမ်းသော PTC Website နှစ်ခု မိတ်ဆက်
8:46 PM နည်းပညာများ, ဗဟုသုတများ No comments
အင်တာနက်မှာငွေရှာဖွေနေသော ညီအစ်ကို မောင်နှမများအတွက် အမှန်အကန်ငွေပေးကြမ်းတဲ့ Website အသစ်နှစ်ခု မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...Neobux , Probux ထက်ငွေပေးပိုကြမ်းပါတယ်ခင်မျာ. ငွေရှာနည်းအကြောင်းမသိသေးတဲ့သူများအတွက်ကတော့
ဒီမှာ စာအုပ်ဒေါင်းပြီးဖတ်နိုင်ပါတယ်..အခု ဖော်ပြတဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်နှစ်ခုမှာတော့ Bot စနစ်မသုံးဘဲ လက်နဲ့ဘဲ
Click ရမှာဖြစ်ပါတယ်..Member ၀င်ပြီးတာနဲ့.. View Ads ကိုနှိပ်ပါ..Click လုပ်ရမယ့်ကြော်ငြာတွေ တွေ့ပါ
Internet Download Manager ဗားရှင်းမှန်သမျှကို Full Version ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Patch ဖိုင်
8:32 PM internet 1 comment
Internet Download Manager နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခဏခဏ မေးကြလွန်း
လို့ပါ ... IDM ကလည်း ဗားရှင်းအသစ်တွေ ခဏခဏထွက်နိုင်လွန်းတော့
Crack ဗားရှင်းသုံးနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်
အလုပ် ရှုပ်ပါတယ် ... ဗားရှင်းအသစ်ကို မဒေါင်းပြန်ရင်လည်း
Noti တွေက ခဏခဏတက် .. ဒေါင်းပြီး Install လုပ်လိုက်ပြန်ရင်လည်း Trail ဗားရှင်းပြန်ဖြစ်နဲ့ ..
ဒီတော့ IDM က ထွက်သမျှ ဗားရှင်းတိုင်းကို Full Version ဖြစ်အောင်
သေချာပေါက် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Patch ဖိုင်လေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်
ဒီ Patch ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းယူထားပြီး သိမ်းထားလိုက်ပါ ..
IDM က ထွက်လာသမျှ ဗားရှင်းအသစ်တွေကို ဒေါင်းယူပြီး Install လုပ်
ပြီးတာနဲ့ ဒီ Patch ဖိုင်လေးနဲ့ Full Version ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ် ..
မိုဘိုင်းဖုန်းမှ အင်တာနက် လျှောက်ထားမှု ၁၅၀၀ တန်ဖုန်းများ ပါရန် မသေချာ
4:29 AM Mobile သတင်းများ No comments
သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စ၍ တနိုင်ငံလုံးမှ တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားနိုင်မည် ဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့် မိုဘိုင်းအင်တာနက် လျှောက်ရာတွင် ၁၅၀၀ တန် ဆင်းမ်ကတ်သုံး တန်ဖိုးနည်းဖုန်းများ ပါဝင်နိုင်ရေးမှာ မသေချာသေးကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး မိုဘိုင်းဌာနမှ အင်ဂျင်နီယာမှူး ဦးအောင်ကျော်သက် ထံမှ သိရသည်။
“၁၅၀၀ က GSM (ဂျီအက်စ်အမ်) လိုင်းကိုတော့ ကြိုးစားလုပ်နေတယ်။ ၁၅၀၀ တန် GSM (ဂျီအက်စ်အမ်) က ဒီလလယ်လောက် ဖြန့်မှာဆိုတော့ လကုန် ရ၊ မရက မပြောနိုင်သေးဘူး။ CDMAကတော့ မရနိုင်သေးတာ သေချာတယ်” ဟု ဦးအောင်ကျော်သက်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ငွေဖြည့်ကတ်သုံး မိုဘိုင်းဖုန်းများမှ မိုဘိုင်းအင်တာနက်လိုင်းကို တနိုင်ငံလုံးတွင် တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Surface RT ဈေးလျှော့ပြီဆိုတိုင်း ဝယ်သင့်သလား
3:03 AM ဗဟုသုတများ No comments
မကြာသေးမီကပဲ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်ထဲမှာ Microsoft က ထုတ်တဲ့ Surface RT တက်ဘလက် တွေကို ဈေးလျှော့ချလိုက်ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ တက်လာပါတယ်။ Surface RT တက်ဘလက် တစ်လုံးကို 32GB ဆိုရင် ၃၄၉ ဒေါ်လာ နဲ့ 64GB ဆိုရင် ၄၉၉ ဒေါ်လာလို့ သတင်းတွေမှာ ဖတ်လိုက် ရပါတယ်။
မြင်ကွင်း ၁၀ ဒသမ ၆ လက်မ တက်ဘလက် တစ်လုံးကို ၃၄၉ ဒေါ်လာ ဆိုတာကတော့ မက်လောက် စရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဝယ်သင့်သလား လို့ မေးရင်တော့ စဉ်းစားပါလို့ ပြန်ဖြေရလိမ့်မယ်။
လက်ရှိ နောက်ဆုံးထုတ် iPad တက်ဘလက် တစ်လုံးဟာ 16GB မော်ဒယ် ဆိုရင် မြင်ကွင်း ၉ ဒသမ ၇ လက်မကို ၄၉၉ ဒေါ်လာလောက် ပေါက်ပါတယ်။ Google ကထုတ်တဲ့ Nexus 10 ကတော့ 16GB ဆိုရင် ၃၉၉ ဒေါ်လာလောက် ရှိတယ်။ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဲဒီ တက်ဘလက် နှစ်လုံး နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ Surface RT ဈေးက မက်လောက်တဲ့ ဈေးလို့ ပြောနိုင် ပါတယ်။
ဖုန်း ဘက်ထရီနှင့် ပက်သက်၍ ရှောင်ရန်အချက်များ
2:06 AM နည်းပညာများ, ဗဟုသုတများ No comments
ဒီတစ်လော သတင်းတွေကြားနေရပါတယ်။ iPhone5ကြောင့် ဓာတ်လိုက်သေရတဲ့ လေယာဉ်မယ် သတင်း၊ Samsung Galaxy S3 အိပ်ကပ်ထဲမှာ ပေါက်ကွဲတဲ့သတင်းတုိ့အပြင် ဖုန်းပေါက်ကွဲမှုနဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်းများ၊ လူသေမှုသတင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကစလို့ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာတဲ့ သတင်းတွေပါ။ အဖြစ်များတာ ကတော့ တရုတ်ပြည်မှာပါ။ အကြောင်းကတော့ အာမခံချက် နည်းတဲ့ ပစ္စည်းကြောင့်မို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကို အားသွင်းနေ ရင်း ပြော တာကြောင့်ရော၊ အချိန်လွန်သွင်းတာတွေကြောင့်ရော ဖြစ်ပါတယ်။
Apple ကတော့ ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Apple ပစ္စည်းက ဓာတ်လိုက်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Macbook တွေမှာ သိသာပါတယ်။ သံမန်သလင်းပေါ်မှာ ဖိနပ်မစီးဘဲ အားသွင်းထားတဲ့ Macbook ကိုကိုင်ရင် ဓာတ်လိုက်တာ ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ iPhone ကတော့ မသိပါဘူး။
Internet Download Manager 6.17 Build2USB Carried | 5.51 MB
9:26 PM internet No comments
Internet Download Manager 6.17 Build2Final Version လေးကို USB နဲ့ သယ်ဆောင်ပြီး အလွယ်တကူ ရောက်တဲ့ နေရာမှာ Install လုပ်စရာ မလိုပဲ Download ဆွဲမယ်ကြရအောင်ဗျာ။
ကျွန်တော် က ဒီ ကောင်လေး နဲ့ ပဲ နှစ်ပါးသွားနေတာဗျာ။ :P ဘယ်ရယ်လို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး ??? ပါပဲ ဟိဟိ . ဘယ်လိုလည်း ဆိုတာတော့ သိချင်ရင်တော့ Download ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ဟိဟိ :P Download ဆွဲ ပြီး အဖြေ သိတဲ့ အခါ ကျွန်တော် ကိုတော့ ဆရာကြီးတွေ မအော် နော် ဟိဟိ ကြိုပြောထားတာ တော်ကြာ အထောင်း ခံရမှာ ဆိုလို့ =D
ဒီလိုဗျာ ကျွန်တော် တို့တွေ အိမ်မှာ သုံးလို့ Internet လှိုင်းမကောင်းလို့ အဆင်မပြေတဲ့ အခါကျရင် စိတ်ညစ်ရတယ်ဗျာ။ Download ချင်တာတွေ မ Download ရဘူးလေ MPT ကောင်းကြောင်းတွေပဲ ထိုင်ပြောတာပေါ့ :P ဒီလို လှိုင်းမကောင်းလို့ Download ချင်တာတွေ Download စရာရှိရင် Internet ဆိုင်သွားရတယ်လေ လှိုင်းကောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေပေါ့ ဒါပေမဲ့ တချို့ Internet ဆိုင်တွေက Download Manager မရှိဘူး ။ Install လုပ်ပြီးသုံးရတယ်လေ Install ပေးမလုပ်တဲ့ ဆိုင်တွေ လည်းရှိတယ်ဗျ နောက်ပြီး တချို့ ဆိုင်တွေ ဆိုရင် Download Manager စက်အပေါ် တင်လို့တောင်မ ရအောင် Window C / ဖျောက်ထားကြတယ်ဗျ ကျွန်တော် တောင် ဒီ အကြောင်း မသိခင်တုန်းက ဆို ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ကြုံဖူးတယ်ဗျာ။ ပြောတာတောင် ရှည်သွားပြီး အဲ ဒီ တော့ Download Man တွေ ကဲ ဒီလိုလေ လုပ်ကြတာပေါ့ ဟိဟိ =D ကြိုက်တဲ့ အင်တာနက် ဆိုင် သွားထိုင် USB အသုံးပြုခွင့်ရှိရင် ကိစ္စ အပြီး ပျက်ပြီး ဟီး :P
9:04 PM နည်းပညာစာအုပ်များ No comments
ကို﻿ဇော်﻿သွင်﻿ စန္ဒယားနှင့်﻿ကီးဘုတ်﻿ ဆိုတဲ့သူကတင်﻿ထားတာ﻿တွေလို့share﻿ပေးလိုက်﻿ပါတယ်﻿
mediafire link-- http://adf.ly/SDbwj
One click download link-- http://adf.ly/SDbee
Box link-- http://adf.ly/SDcHV
Dropbox link-- http://adf.ly/SDcUs
Copy link-- http://adf.ly/SDclQ
4share link-- http://adf.ly/SDdl5
credit to ကို﻿ဇော်﻿သွင်﻿ စန္ဒယားနှင့်﻿ကီးဘုတ်﻿
8:57 PM computer Software, နည်းပညာများ No comments
Android Users Guide နှင့် Android Phone အားလုံးရဲ့Root လုပ်နည်းမျိုးစုံ (မြန်မာဘာသာပြန် Ebook)
8:22 PM android root, နည်းပညာစာအုပ်များ No comments
Android အသုံးပြုပုံ နဲ့ Android Phone တွေအားလုံးရဲ့ Root လုပ်နည်းမျိုးစုံ နှင့် Application & Game တွေ
ကို Free Download ယူပုံအားလုံးကို ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီစာအုပ်ကိုမူရင်း
ရေးသားထားသူကတော့Chateau Man ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
စတဲ့ Brand တွေအားလုံးရဲ့ အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအလိုက် Root လုပ်ပုံတွေကို ပုံနဲ့တကွအသေးစိတ်ရှင်း
ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Android User တိုင်းတဲ့ Service သမားများ လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်
Gtalk မှာ Theme လှလှလေးပြောင်းသုံးမယ်
8:19 PM internet No comments
Gtalk ကို ကြည့်ရတာ ရိုးအီလာရင်တော့ theme လှလှလေးပြောင်းသုံးပါ။Myanmar mobile user group က ညီငယ် တစ်ယောက်မေးထားတာကို ရှာပေးရင်းဒီဆောင်းပါးကို ရေးပါတယ်။
အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်ကနေ my theme ဆိုတဲ့ zip ဖိုင်ကို ဒေါင်းပြီး ဖြည်ပါ။ပြီးရင် windows explorer ကိုဖွင့်ပြီး Tools > Folder Options > View ကနေ show hidden files ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။my theme ဖိုဒါကို ကောက်ပီကူးပြီး C:\_Users\_(user name)\_AppData\_Local\_Google\_Google Talk\_themes\_user\_chat ဖိုဒါထဲမှာ paste လုပ်ပါ။ chat ဖိုဒါမရှိသေးရင် ပြုလုပ်ပါ။my theme က theme name ဖြစ်ပြီး my theme ဆိုတဲ့နာမည်အစား သင်ကြိုက်ရာ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ taylor swift ပုံကို သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် taylor swift လို့ နာမည်ပေးပါတယ်။ပုံပြောင်းနည်းကို အောက်မှာပြောပါမယ်။ပြီးရင် gtalk ကိုဖွင့်ပြီး setting ထဲက apperance ထဲမှာ အပေါ်က theme name ကိုရွေးပေးပါ။ဒါဆိုရင် chat window မှာ အပေါ်ကပုံမှာလို မြင်တွေ့ နိုင်ပါပြီ။
Windows Update တွေဖြစ်နေတာကို ပိတ်ရအောင်
1:33 AM computer Software, နည်းပညာများ No comments
ဒါကတော့ Windows Update ပိတ်ချင်သူများအတွက် သွားပိတ်ရမယ့်နေရာလေးတွေကို ပြပေးလိုက်တာပါ..။ ဘာကြောင့် Windows Update လုပ်တာလဲ..။ အခုဒီနည်းက ကွန်ပျူတာ ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာ စက်ဝယ်တဲ့အခါ Original Windows မပါရင်၊ သူတို့ ဘာသာ Windows တင်ပေးတတ်ပါတယ်..။ အဲလိုအခါမျိုးကျရင် Windows Update မတက်အောင် အခုကျနော်ပြတဲ့ နည်းလေးတွေနဲ့ ပိတ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်..။ နောက်တခုက Windows တင်တင်ချင်းမှာလဲ Update မတက်အောင် ပိတ်ခဲ့ရတဲ့ နေရာတခုရှိပါတယ်..။
Automatically Windows Update အင်တာနက်လိုင်းဖွင့်တာနဲ့ အော်တိုမက်တစ် Update လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အမှန်ခြစ်လေး ဖြုတ်ပေးခဲ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ သူကတော့ ဝင်းဒိုးတင်တဲ့အချိန်မှာ လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံနဲ့ပြပေးဖို့ ခက်ပါတယ်..။ ဒါကြောင့် စာပဲရေးပြပေးလိုက်တာပါ..။ အခုလုပ်ရမယ့် အဆင့်တွေကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေအတိုင်းပါပဲ..။
Windows7 တင်ပြီးတဲ့အခါ Driver တွေကို ဘယ်လို Restore ပြန်လုပ်မလဲ
1:31 AM Driver များ No comments
အရင်ဆုံးသိထားရမှာက Window တင်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ လိုအပ်တာက.. Driver Backup လုပ်ထားတဲ့ဖိုင် ဒါမှမဟုတ် မိမိတို့ စက်ရဲ့ မူရင် Driver ခွေ လိုအပ်ပါတယ်..။ Driver ခွေမရှိတော့တဲ့သူများ အတွက် Driver Backup လုပ်လို့ရမယ့် ဆော့ဝဲလ်လေးကို ဟိုးအရင်တုန်းကတည်းက တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်.. လိုအပ်တဲ့သူများ ဒီလင့်မှာ ဝင်သွားယူလိုက်ပါ.. Driver Backup လုပ်နည်းကိုပါ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်..။ ဝင်းဒိုးမတင်ခင် အရင်ဆုံး Driver Backup လုပ်ထားလိုက်ပါ..။ မူရင်း Driver ခွေရှိတဲ့ သူများအတွက်တော့ Backup လုပ်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး..။
Software ပေါင်း 4000 ကျော်ရဲ့ Key ကိုတွေရှာပေးနိုင်တဲ့ Product Key Explorer v3.4.2 Portable
12:27 AM computer Software No comments
ကဲဗျာ ခေါင်းစဉ်လေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့တင်ဘဲ အားလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြမှာပါဗျာ။ ဒီကောင်လေးက File Size သေးသေးလေးနဲ့ အတော်လေးအသုံးဝင်တဲ့အတွက် တွေ့တုန်းလေးတော့ ဒေါင်းယူထားစေချင်ပါ တယ်ဗျာ။ ပြီးတော့လည်း ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာ Portable Version ဆိုတော့ Double Click နဲ့တင်ဘဲပွဲ သိမ်းပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးက ကွန်ပြူတာမှာ Install လုပ်ထားတဲ့ Software တွေရဲ့ Product Key ကိုရှာ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိမိလိုချင်တဲ့ Key အတွက် သက်ဆိုင်ရာ Software ကိုတော့ Install လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ Key ရှာဖွေနေစဉ်မှာလည်း Internet Connection တော့ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မျိုးစုံလှတဲ့ ဗေဒင် ဆော့ဖ်ဝဲများ for Android apk
9:30 PM Android Application2comments
** Step-1.ပေးထားသော လင့် ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
** Step-2."5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။
** Step-3." > Skip Addပေါ်လာလိမ့်မည် နှိပ်လိုက်ပါ။
** Step-4.Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။
9:12 PM internet No comments
ကော်နက်ရှင် မကောင်းလည်း Youtube ဗီဒီယို ဖြောင့်ဖြောင့် တန်းတန်း ကြည့်နည်း
8:29 PM internet No comments
မယုံလို့ ကိုယ်တိုင် စမ်းသုံးကြည့်လိုက်တာ တကယ်ပဲ မှန်ကန်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကနေ Youtube ဗီဒီယိုကို မထစ်မငေါ့ပဲ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း ကြည့်ဖို့ဆိုတော လောလော ဆယ်မှာ မလွယ်ကူတဲ့ အနေအထား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမ့ယ် ဒါကို ဖြေရှင်းပေး မယ့် နည်းလေးလေး တွေ့လိုက်ပါပြီ။ Feather Beta ဆိုတာလေးပါ။ Youtube မှာ ပါတဲ့ Like , Comments, Links နဲ့ ဆိုဒ်ကိုလေးစေတဲ့ အခြားအခြားသော UI နဲ့ Gadgets တွေကို ဖြုတ် ထားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါ လခ့်ကနေ ဝင်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ ပုံမှာပြထားတဲ့ Join "Feather" Beta ဆိုတာလေးကို နှိပ်ယုံပါပဲ။ ပြီးရင် ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ Youtube က ဗီဒီယို၊ MTV တွေကို ရှာပြီး ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
8:28 PM backup လုပ်နည်းများ, Driver များ No comments
Gmail Account တစ်ခုတည်းနဲ့Facebook Account တွေ အများကြီးဖွင့်ကြမယ်
7:40 PM internet 1 comment
တကယ်တော့ အားလုံးသိထားကြတာ gmail account တစ်ခုကို facebook account တစ်ခုပဲ ဖွင့်လို့ ရတယ် လို့ ပဲ သိထားကြတယ်။
တဂယ်လဲ facebook က mail တစ်ခုကို account တစ်ခုပဲ ပေးဖွင့်တယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော့်မှာ mail account တစ်ခုတည်းနဲ့facebook account တွေ အများကြီးဖွင့်လို့ ရတဲ့နည်းရှိတယ်။
အရင်ဆုံး အသုံးပြုမယ့် mail က ဥပမာအနေနဲ့kochartape@gmail.com ပဲဆိုပါစို့ ။
www.facebook.com ကို သွားပြီးတော့ sign up လုပ်ပါ။
အဲ့လို sign up လုပ်တဲ့နေရာမှာ name တို့Date of Birth စသည်ဖြင့် အားလုံးကို ပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြည့်လိုက်ပါ။
7:37 PM Myanmar Font များ No comments
WindowsPhone အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် WindowsPhoneမှာFont တွေထည့်သွင်းချင်တဲ့အခါမိမိ
WindowsPhone မှာသင်ထည့်သွင်းချင်တဲ့ Font ကိုထည့်သွင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်အဆင့်ငါးဆင့်ပဲရှိမှာဖြစ်
ပါတယ်။သင်ထည့်သွင်းချင်တဲ့ Font ကို WindowsPhoneOS မှာထည့်သွင်းဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာရှိဖို့တော့
လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ထည့်သွင်းချင်တဲ့ ဖောင့်တွေကိုတော့ Handset နဲ့ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ပြီး
မှာဖြစ်ပါတယ်။ WindowsPhone ထဲကို Font ထည့်သွင်းဖို့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အချက်ငါးချက်ပဲရှိပါတယ်။
၁။သင့်ရဲ့ WindowsPhoneOSအ သုံးပြုထားတဲ့ Handset ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ActiveSync ကို
Facebook ကနေ Email တွေပို့တာ ရပ်တန့်စေချင်ရင်
9:29 PM internet No comments
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက အသုံးပြုနေကြတဲ့ Social Network တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ကတော့ တကယ်လည်း အကြိုက်တွေ့စရာကောင်းပါတယ် ....။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကို ဆက်သွယ်ရလွယ်ကူသလို သတင်းစုံ သိရပြီး ကိုယ်သိတာလေးတွေကို အလွယ်တကူ ပြန်မျှဝေနိုင်တယ် ....။ ဓါတ်ပုံတွေကို Image Hosting ကြားခံသုံးစရာမလိုဘဲ တိုက်ရိုက်တင်နိုင်တာက အားသာချက်ဖြစ် နေသလို သူ့မှာပါတဲ့ Comment စံနစ် ကလည်း နှစ်ခြိုက်စရာ ကောင်းလှပါတယ် .....။ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးပါဘဲ ....။ ခက်နေတာက Facebook အကောင့်ဖွင့်တုန်းက သုံးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ထဲမှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ email ပေါင်းများစွာ ရောက်ရှိလာတဲ့ ကိစ္စပါ ....။ ဒါကလည်း တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုသူတွေ ဘက်ကနေပြီးတော့ ပြုပြင်ပေးထားလို့ ရပါတယ် ...။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာလေး ရေးပေးပါမယ်။ (တကယ်တော့ ရေးပေးထားတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးရှိ သလို သိပြီး၊ တတ်ပြီး သူတွေလည်း အများကြီး ဖြစ်မှာပါ ...။) မသိသေး၊ မတတ်သေးတဲ့ သူ တစ်ဦးတစ် ယောက်ကများ ကျွန်တော့် Blog ထဲက ဒီ Post လေးကို မျက်စိလည်ပြီး ရောက်လာ ဖတ်ရှုခဲ့မိမယ် ဆိုရင် ..... ဒီ Post လေးကို ရေးတင်လိုက်ရတဲ့ အတွက် ပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန် (30) မိနစ်အတွက် ကျွန်တော် နှမျောမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး ....။ ကဲ ... ဒီလိုလေး လုပ်လိုက်ရအောင် ....
ZTE U973 Root လုပ်နည်းလေးပါ
6:39 AM android root No comments
ZTE U973 Root လုပ်နည်းလေးပါ ဒီဖုန်းလေးနဲ့ ကျွှန်တော်တိုင်တော်တော်ပတ်ခဲ့ပါတယ်
Root Tool တွေလဲတော်တော်စုံခဲ့ပါတယ် အဆင်မပြေပါဘူး
Root လုပ်နည်းလေးကလွယ်ပါတယ် Recovery သွင်းပြီ Root လုပ်ရမှာပါ
Recovery သွင်းဖို့ အတွက် .pic ဖိုင်းလေးကျွှန်တော်လုပ်ထားပါတယ်။
Recovery သွင်းဖို့အတွက်တော့ ကျွှန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်
မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီလင့်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်
SM3 မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးလမ်းညွန် Mobile Dierctory apk
6:24 AM Android Application No comments
မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် လွယ်ကူစွာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မည့် sm³ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးလမ်းညွှန်ကို မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာဖြင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ သုံးစွဲသူများအတွက် အခမဲ့ ဖြန့်ချိပေးလျက်ရှိပါသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူများအတွက် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ များ လွယ်ကူချောမောစွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဖုန်းဖြင့် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း၊ ကြိုတင် Booking /Reservation တင်ခြင်းများ၊ ဖုန်းဖြင့် အမှာစာ မှာကြားခြင်းနှင့် အိမ်အရောက် ၀န်ဆောင်မှုများ ခေါ်ယူခြင်း
1:48 AM Android Root Tool No comments
china one key root tool
10:33 PM Android Root Tool No comments
Android Phone 2.1 ကနေ 4.0.3 ထိ Root လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Android Phone 1000 ကျော်ကို Root လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
One Key Root Tool လေးဖြစ်တဲ့ အတွက် သုံးရတာလဲတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ပြန်လည်မျှဝေးပေးလိုက်ပါတယ်။
TCP/IP ကိုအသုံးပြုပြီး အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို 200 % အထိမြှင့်တင်နည်း
8:36 PM internet No comments
အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မြှင့်တင်တဲ့ Software ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်..ဒါပေမယ့်အဲဒါတွေက Install လုပ်ပြီးရင် Optimized ကိုနှိပ်ပြီး အလွယ်တကူမြင့်တင်တဲ့နည်းပါ..အခုဖော်ပြမယ့်နည်းကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ Settings ချပြီးမြှင့်တင်မယ်နည်းဖြစ်ပါတယ်..ကျနော်စမ်းကြည့်တာအကုန်အဆင်ပြေပါတယ်..
မြန်နှုန်းလဲ သိသိသာသာတက်လာပါတယ်..သို့ပေမယ့် အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ဆိုတာ မူရင်းကောင်းမှ မိတ္တူကောင်းပါလိမ့်မယ်...ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ သီးခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလွန်သွားရင်တစ်ချက် တစ်ချက် ထထဆဲမိပါတယ်... MPT ကလူကြီးမင်းများကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေပေါ့လေ..:ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် မူလထက်မြန်လာတယ်ဆိုကတည်းက စိတ်ကျေနပ်စရာလေးပါ :P ကဲ စကားများသွားပြီ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကြည့်လိုက်ရအောင်...
8:26 PM Recovery No comments
ကွန်ပြူတာ၊ ဖုန်း ၊ ကင်မရာ Memory ကဒ်တွေထဲကနေ ပျောက်သွား၊ ပျက်သွားတဲ့၊ ဖျက်သွားမိတဲ့ အချက်အလက်အားလုံးကို ပြန်ယူပေး မယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလေးလို့ ဆိုပါတယ်။
ကွန်ပြူတာကနေ ပြန်ယူဖို့က အသုံးပြုလို့လွယ်ကူပါတယ်။ Install လုပ်လို့လည်း လွယ်ကူပါတယ်။ စသုံးမယ်ဆို သူက ပုံကိုလား၊ ဗီဒီယိုကိုလား compressed လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ကိုလား၊ အခြားလား အစရှိသဖြင့် မေးပါတယ်။ ပြီးရင် နောက်တစ်ဆင့်က ဘယ်နေရာမှာ ရှိသလဲ ဆိုတာကို ထပ်ရွေးခိုင်းပါတယ်။ Recycle Bin မှာလား၊ Data D မှာလား၊ E မှာလား သို့မဟုတ် ဘယ်နေရာကပဲ ဖြစ်ဖြစ်လား ကြိုက်သလို Select လုပ်လို့ ရပါတယ်။
Computer Driver တွေကို အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ Backup / Restore လုပ်မယ်
8:22 PM Driver များ 1 comment
Computer တစ်လုံးမှာ Driver ဆိုတာအရေးအကြီးဆုံးပါ..Driver ဆိုတာ Windows စနစ်ကောင်းစွာအလုပ်
လုပ်ဖို့အတွက် Audio , Network , VGA , USB စတဲ့ စတဲ့ Hardware Device များကောင်းစွာအလုပ်လုပ်
နိုင်ဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာများဖြစ်ကြပါတယ်..Windows တင်ပြီးတာနဲ့ Driver တွေတင်ရတယ်..မတင်ရင်
အသံ ... Wireless စတာတွေ သုံးမရဖြစ်တတ်ပါတယ်..ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ..အခုမှစတင်လေ့လာ
ဖို့လိုလာပြီဆိုရင် အရင်ဆုံး နဂိုရှိထားပြီးသား Driver တွေကို Backup လုပ်ထားရပါမယ်..၀င်းဒိုစ်းတင်ပြီး
တာနဲ့ ပြန် Restore လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် နဂိုမူလတင်ထားတဲ့ Driver တွေကိုပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
Facebook မှာ ကို Like ထားတဲ့ Page တွေ ဖွက်ထားနည်း
8:20 PM internet No comments
အသိတစ်ယောက်က အခုလို လုပ်ချင်နေတာနဲ့လုပ်ပေးကြည့်လိုက်တာ မိုက်တယ်ဗျ
ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်
သူ့ စာမျက်နှာသွားပီးကြည့်လိုက် သူ like လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေက Sexy Page တွေ
ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သူများမြင်တော့ မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်
8:01 AM ဗဟုသုတများ No comments
ပါဝင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများက ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ SIM card မှာ မှတ်ဥာဏ်သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ ပမာဏလည်း အသင့်တင့် ရှိပါတယ်။ ယင်းကလည်း ထုတ်လုပ်သူအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကျနော် တို့ မြန်မာပြည်က SIM Card မှာဆိုရင် Phone Address ဘယ်နှစ်ခု ထည့်သွင်း သိမ်းဆည်းနိုင်တယ်ဆိုပြီး သူ့အကန့်အသတ်နဲ့ သူရှိပါတယ်။
8:13 PM internet 1 comment
100% သေချာတဲ့ facebook
computerတို့နဲ့လော့ခ်မကျ verified ph number တို့မတောင်း
အောင် သေချာတဲ့fb အကောင့်န်ဖောက်နည်း(၂)ဆိုတဲ့
pdf စာအုပ်လေးတအုပ်ကို ရေးသားပြုစုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ဒီနည်းဟာ 100% သေချာတဲ့fb
ပေါင်း 30 ကျော်ကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ဖောက်လုပ်ရရှိအောင်မြင်ထားတဲ့နည်း
Virus အမျိုးစားအများကြီးထဲမှာမှ ဒီ Trojan Virus အကြောင်းကို သိပီးပီလား
8:45 AM Virus No comments
Trojan ဆိုတာ ငယ်ငယ်က သမိုင်းထဲမှာ သင်ရတဲ့ မြင်းရုပ်ကြီးကို ရည်ရွယ်ပြီးတော့
ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုတယ် ။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ ခက်တဲ့
ထရိုဂျန်မြို့ ကို မြင်းရုပ်ကြီးတစ်ရုပ်ဆောက် အထဲမှာ စစ်သည်တော်တွေကို ထည့်ပြီး
ခိုးဝင်တဲ့နည်းပါပဲ ။ တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ လုပ်တာကို ဆိုလိုပါတယ် အဲ့ကြောင့် ဒီ Virusက
ကိုယ့်ကွန်ပျုတာထဲဝင်လာပီဆို စက်အတွင်းပိုင်းကို မွှေပါလိမ့်မယ် Trojan ဆိုတာက
Virus လိုမျိုး ကိုယ်တိုင် Replicate မလုပ်ပါဘူး ။ဘယ်နေရာတွေကနေ စက်ထဲဝင်လဲ
ဘဲလား ကြက်လား Yes လား No လား ဆိုတာတွေ ကိုယ့်က ဘုမသိဘမသိ နှိပ်မိရင်
တချို့ ဆော့ဝဲတွေနောက်ကနေ မသိမသာကပ်ပါလာတတ်ပါတယ် ။ စက်ထဲကိုသာ
မြင်းရုပ်ဥပမာထားပီး အတွင်းကရန်သူတွေ လိုက်လာတာမျိုး ခံရရင် ကိုယ့်စက်ဟာ
Android Phone တော်တော်များများ ကို Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ SRSRoot Tool
နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ SRSRoot Tool လေးပါ။ one click Tool ဆိုတော့ Root လုပ်ရတာလဲလွယ်ပါတယ်။ Android versions 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.0...
credit to >> Nga Luu ကို Nga Luu ရဲ့ကြိုးပမ်း မှုကို လေးစားပါတယ်ဗျာ :) လုပ်နည်းကို အဆင်ပြေအောင်စာပြန်စီပေးလိုက်ပါ တယ် :) ...
** Step-1.ပေးထားသော လင့် ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ** Step-2."5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။ ** Step-3." > Skip Addပေါ်လာလိမ့်မည် နှ...
Vroot English Version 1.6.0
Android ဖုန်းအမျိုးအစား ၃၀၀၀ ကျော်ကို Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Vroot English Version အသစ်လေးပါ တရုတ်လို့မသိတဲ့ သူတွေအတွက် Root လုပ်တဲ့ အချိ...
ဓါတ်ပုံတွေကို Video အဖြစ်သီချင်းလေးတွေနောက်ခံထားပြ...
အင်တာနက် search engine တွေမှာ professional တစ်ယောက...
Facebook Video များကို ဆော့ဝဲမလိုပဲ အလွယ်ဒေါင်းနည်...
PC အတွက် CCleaner Professional Business Edition 4....
Online တွင်အမှန်အကန် ငွေပေးကြမ်းသော PTC Website နှ...
Internet Download Manager ဗားရှင်းမှန်သမျှကို Full...
မိုဘိုင်းဖုန်းမှ အင်တာနက် လျှောက်ထားမှု ၁၅၀၀ တန်ဖုန...
Internet Download Manager 6.17 Build2USB Carried...
Android Users Guide နှင့် Android Phone အားလုံးရဲ့...
ကော်နက်ရှင် မကောင်းလည်း Youtube ဗီဒီယို ဖြောင့်ဖြေ...
SM3 မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးလမ်းညွန် Mobile Dierctory ap...
TCP/IP ကိုအသုံးပြုပြီး အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို 200 % ...
Computer Driver တွေကို အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ Backup / R...
Virus အမျိုးစားအများကြီးထဲမှာမှ ဒီ Trojan Virus အေ...
Android Application (34)
Android Application ဖန်တီးခြင်း (1)
android boot and recovery (2)
Android Game များ (19)
Android live wallpaper များ (4)
Android Root Tool (24)
Android Tool (3)
backup လုပ်နည်းများ (2)
China Firmware (2)
computer error (2)
Cydia application များ (1)
Driver များ (5)
HTC bootloader unlock (1)
HTC Firmware များ (1)
Huawei Firmware များ (46)
Huawei Root လုပ်နည်းများ (34)
ios firmware (2)
ios Jailbreak Tool (3)
ios myanmar font (1)
Laptop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် သိရမည့်အချက်များ (5)
Mobile သတင်းများ (22)
Myanmar Font များ (15)
password and pattern delete (1)
phone codes (3)
Samsung Firmware (7)
Samsung Root (5)
Sony Firmware (3)
sony Root လုပ်နည်းများ (2)
Table Firmware (1)
Table Root များ (2)
windows တင်နည်း (4)
windwos တင်နည်းများ (1)
Computer Software များ
Copyright © MOBILE IT NEW | Than Naing Oo Blogger
Design by Than Naing Oo | Blogger Theme by Lasantha - Free Blogger Themes | NewBloggerThemes.com